Wasiiru Dowladaha Arrimaha Dibadda oo qaabilay Safiirka Masar ee Soomaaliya |
Wasiiru Dowladaha Arrimaha Dibadda oo qaabilay Safiirka Masar ee Soomaaliya
Apcalis SX without prescription, acquire clomid. Wasiiru dowlaha Wasaaradda arrimaha dibadda ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Danjiraha Dowladda Masar u fadhiya Soomaaliya, iyagoo ka wada hadlay sidii dowladda Masar ay uga qeyb qaadan lahayd horumarka balaran ee haatan ka socda dalka.
Wasiiru dowlaha arrimaha dibedda Mudane Burci Maxamed Xamza ayaa Danjire Maxamed Cowf kala hadlay xoojinta xiriirka qotoada dheer ee labada shacab iyo labada dowladood ka dhexeeya iyo in Dowladda Masar ay dib u howlgeliso goobihii waxbarasho ee ay Masar ku lahayd dalka kahor bur burkii dalka.
Safiirka ayaa ugu horeyn waxa uu Wasiiru dowlaha Arrimaha dibadda iyo Dhiirigelinta maalgashiga Soomaaliya uga warbixiyay sida ay Dowladda Masar ay ula dhacsantahay horumarka Soomaaliya hadda ka socda, sida la dagaallanka argagaxisada iyo guud ahaan horumaradda dowladda Soomaaliya ay ku talaabsatay.
Wasiiru dowlaha Arrimaha dibadda iyo Dhiirigelinta maalgashiga ayaa isna dhankiisa waxa uu uga mahad celiyay dowladda Masar sida ay mar walba u garab taagantahay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladooda, waxaana uu ku booriyay in la sii xoojiyo arrintaasi.
Dowladaha Soomaaliya iyo Masar ayaa waxaa ka dhaxeeya xiriir joogta ah oo soo jireen ah sida Siyaasadda, Waxbarashada iyo kuwa kale, waxaana maanta labadan mas’uul ka mid ahaa waxyaabihii ay isla garteen in Masar ay ka qeyb qaadato dar dar gelinta horumarada dalka hada ka socda.